LG Innotek, yega mutengesi wemalensi eiyo iPhone 7 Plus | IPhone nhau
Kusvikira 2015, Apple yaivimba neSony ye iPhone kamera lenzi. Tim Cook nekambani, saSteve Jobs nechikwata chake pamberi pavo, vakasarudza kushandisa malensi eSony nekuti ivo, pamwe chete naCarl Zeiss uye sekuziva kwangu, akanakisa (kana akanakisa) malensi enhare mbozha. Asi muchato uyu unogona kuputsa muna 2016, zvirinani kana zvasvika kune malenzi eiyo iPhone 7 Plus. Iyo nyowani mupi, uye inogona kuve yakasarudzika, zvinogona kudaro LG Innotek.
Kwave kuri svikiro Business Korea ndiani akaburitsa zviwanikwa zvemabhizimusi zvinonzi zvakamuzarurira. Kana chiri chokwadi, chakanyanya kukosha nezve ruzivo urwu ndechekuti rinotaura chaizvo nezve «LG Innotek ichave yega mutengesi weiyo mbiri kamera Del iPhone 7 Plus iyo ichasvika munaGunyana wegore rino«, Iyo inosimbisa runyerekupe rwekuti inotevera 5.5-inch modhi yeApple smartphone inoshandisa kamera yepamusoro ine malenzi maviri uye zvinonzwisiswa kuti iyo 4.7-inch modhi inoshandisa kamera senge iyo inoshandiswa neese maPhones kusvika nhasi.
LG Innotek yekupa iyo iPhone 7 Plus Dual Camera Lens
Sekureva kwenzvimbo, LG Innotek ichatanga kutumira iwo maviri kamera module kutanga kwemwedzi uno, ndiko kuti, izvozvi. Chibvumirano zvinogona kunge zviri zvegore rino iPhone Uye chikonzero Apple yamira kuvimba naSony ndechekuti ivo havana kusvika munguva yekuendesa ma module avo, saka iyo iPhone ya2017 ingangoshandisa malensi eSony zvakare. Ehezve, zvese zvinoenderana nehunhu uye mutengo unopihwa nemakambani ese ari maviri.
Maererano ne mamwe makuhwa, Ruzivo rwunofanirwa kutorwa "nematinji", iyo iPhone 7 Plus inoshandisa maviri 12Mpx lenzi, nepo iyo 4.7-inch modhi ichishandisa 21Mpx. Senguva dzose, nguva ichasimbisa kana kuramba ichi nehumwe ruzivo munaGunyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » LG Innotek inogona kunge iri yega mutengesi weiyo iPhone 7 Plus mbiri kamera lenzi
Siri atotipa zvinyorwa nezveWWDC 2016